မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ | အိမ့်မှူးသော်
ကျွန်တော်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာလူမျိုး (၁၃၅) မျိုးရှိတယ်လို့ပဲ သိထားတာ။ ဘာလူမျိုးတွေလဲ ပြောပြပါ့လားဆိုရင်ပြောပြနိုင်ဘူး ။ အဲလိုမျိုးမသိသေးသော သူများအတွက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ။
မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး - အဓိက ကတော့
ကချင် ၊ ကယား ၊ ကရင် ၊ ချင်း ၊ ဗမာ ၊ မွန် ၊ ရခိုင် ၊ ရှုမ်း ၊ ဆိုပြီး ( ၈ မျိုး ) ရှိပါတယ် ။
ကချင်မှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၁၂ မျိုး ရှိပါတယ်။
ကယားမှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၉ မျိုး ရှိပါတယ်။
(၂၁) ယင်းဘော် Yin $%#w
ကရင်တွင် လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၁၁ မျိုး ရှိပါတယ်
ချင်းမှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၅၃ မျိုး ရှိပါတယ် ။
ဗမာမှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၉ မျိုး ရှိတယ်။
မွန်မှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၁ မျိုး ရှိပါတယ်။
ရခိုင်မှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၇ မျိုး ရှိပါတယ်။
(၉၇) ကမန်လူမျိုး Kamein
ရှမ်းမှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၃၃ မျိုး ရှိပါတယ်
me also wants to share.. thanks. :)
MMYK 2:30 PM
thanks you for your information .Let me save and share on facebook and my blog.
Generally I don't read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice post.
My site http://www.proman-help.isys-informatik.ch/